Kolontsaina sy Fandrosoana Malagasy – Adygasy-systemD
décembre 11, 2014 février 5, 2015 Adygasy-systemD
Kolontsaina sy Fandrosoana Malagasy
Malagasy isika. “ADY GASY” no hitondrana sy hamahana ny olana rehetra misy eto Madagasikara, eo anivon’ny fanatontoloana…
1. KOLONTSAINA SY FIARAHA-MONINA
Manana anjara toerana lehibe ny kolontsaina eo amin’ny fampandrosoana ny fiaraha-monina. Ohatra iray tsy zoviana amin’ny maro ny fahaizan’ny Japoney mitana ny hanitra nentin-drazana, sady nianatra ireo haitao avy amin’ny firenena tandrefana ; iaraha-mahita ny toerana misy azy ankehitriny, anisan’ireo firenena matanjaka indrindra eran-tany. Mifampiankina ny fihariana sy ny kolontsaina.
Azo antsoina amin’ny hoe “KOLONTSAINA” ireo fomba fisainana (mode de pensée) sy fomba fiainana (mode de vie) andavanandro, mampiavaka ny firenena iray na faritra iray. Ohatra amin’izany ny fomba fiteny, fitafy, famokarana, fitsarana, fandevenana, fisakafoanana, fanaovantrano, fitsaboana, fanabeazana, fialamboly, fanambadiana, fitondrana, fivavahana sy ny sisa. Midadasika ny sehatry ny kolontsaina.
Na aiza na aiza eran-tany, dia ny mpanakanto, ny mpikaroka sy ny mpanabe no mpitahiry sy mpikolokolo ireo loharanom-pahalalana sy fahendrena mampiavaka sy mampalaza ny firenena niavian’izy ireo; eto amintsika dia tsorina fa mihen-danja be dia be ny kolontsaina malagasy, oharina amin’ireo kolontsaina vahiny, izay mibahan-toerana indrindra indrindra any amin’ny tanan-dehibe.
Azo raisina tahaka ny entam-barotra ny kolontsaina, mitovy laharana amin’ny vokatra fanondrana toy ny kafe, ohatra: entam-barotra sarobidy any amin’ny tany mandroso, afaka mamelona orin’asa maro, nefa atao VARO-BOBA any amin’ny tany andalam-pandrosoana.
II. KOLONTSAINA MALAGASY:
Manana ny maha-izy azy ny kolontsaina malagasy ary afaka mivelatra rehefa:
• hatao ANTONDRAHARAHA ny fikarohana, ny fikajiana sy ny fiarovana ireo kolontsaina sy harentsaina rehetra misy eto amintsika (recherche et conservation)
• voatsinjara mazava ny andraikitry ny FANJAKANA sy ny mpandraharaha eo amin’ny famokarana sy ny fampielezana ny vokatra kolontsaina malagasy (production et diffusion)
• homena ny HASINA sy ny toerana sahaza azy (statut) ireo mpanakanto malagasy, ahazon’izy ireo mizaka ny zony, mamelon-tena sy mifandray amin’ny any ivelany
• beazina ny tsirairay hahay handray sy hampiroborobo ny zavakanto malagasy sy ny kolontsina amin’ny ankapobeny (accès à la culture).
III. ADY GASY:
Faka tahaka, soa fianatra ny zavabitan’ireo firenena mandroso: tsy azo ialana rahateo ny fiankinana amin’ny haitao sy ny kolontsaina vahiny, vokatry ny fandrosoan’ny fifandraisana eran-tany.
Azo atao tsara ny mampivady ny haitao sy ny hanitra maha-malagasy amin’ny fampiasana ny haitao avy any ivelany eo amin’ny sehatra sy lafim-piainana maro: eo amin’ny famokarana, eo amin’ny fitondrana, eo amin’ny ara-kolontsaina sy ny sisa.
Izay no tiana ambara amin’ilay teny filamatra hoe “ADY GASY”. Ady gasy mitondra fandrosoana, loharano sarobidy, tontolo iainana malagasy.
Novambra 1991/ Initiatives & Développement Madagascar
(nivoaka voalohany t@ Midi Madagasikara – 03 desambra 1991)
TOVANA: ANDIAM-PANONTANIANA : “KOLONTSAINA SY FAMPANDROSOANA”
Sasinteny: Ireo valinteny azo vokatr’ity andiam-panontaniana manaraka ity no nandrafetana ny volavolan-kevitra naroso teo ary noatevenina amin’ny alalan’ny sosokevitr’ireo mpisehatra sy mpanakanto nandray anjara tamin’ny loabary andasy izay notontosaina ny volana septambra 1991.
“ Maniry, mamelana ary mamoa ny ZAVAKANTO.
“HAZO TSARA VOA IZY”, afaka mamelona ny mpanakanto mamboly azy.
Vary sy rano amin’ny vanin’andro sy vanim-potoana iainan’ny firenena ny ZAVAKANTO.
Mazava tahaka ny masoandro be lohataona sy volana fenomanana ny filàna sy ny lanjany.
Andraikitra lehibe ho an’ny mpanakanto sy ireo mpandraharaha voakasika ny fikarohan-dalana sy fananganana DRAFITRA MATY PAIKA hananan’ny ZAVAKANTO ny toerana maha-izy azy eo amin’ny fampandrosoana ny FIRENENA.
1. Araka ny hevitrao, manao ahoana ny lanjan’ny MAHA-MALAGASY eo amin’ny Kolontsaina misy eto amintsika ?
2. Inona no tokony andraikitry ny Fanjakana eo amin’ny sehatry ny ZAVAKANTO ?
3. Manao ahoana ny anjara toeran’ny Kolontsaina eo amin’ny sehatry ny FANABEAZANA ?
4. Mitondra FAMPANDROSOANA ve ny Kolontsaina, ary amin’ny fomba ahoana ?
Fahitana sy fanontaniana ankapobeny ireo.
Malagasy isika. “ADY GASY” no hitondrana sy hamahana ny olana rehetra manempotra ny ZAVAKANTO sy ny toerana misy ny MPANAKANTO eto Madagasikara; izany hoe, “loa-bary an-dasy” ny ady hevitra, izay tapaky ny be sy ny maro eo: “TENY IERANA FITANA”
Soraty ao ambadika ny valinteninao / Misaotra @ ny fandraisanao anjara. » (Septambra1991)
sokajy “teny gasy” : jereo koa https://adygasysystemd.wordpress.com/ny-aminny-ady-gasy/
Posté dans Teny gasyTagué ady gasy, fanabeazana, Madagasikara, Malagasy, zavakantoLaisser un commentaire
Article PrécédentAboutArticle SuivantADY GASY : 1 Film & des Cultures Malagasy